Ngathi | I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd.
I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd.
Unyaka ka-2011 ungqinele imarike ephambeneyo yezinto ezinqabileyo zomhlaba, ngakumbi i-PrNd kunye ne-DyFe, ezizezona zinto ziphambili zemveliso yemagneti yeNeodymium enqabileyo. Ubuqhetseba buye baphula nonxibelelwano lwexesha elide kunye nokunyanzela abathengi abaninzi abanxulumene nemazibuthe ukuba bafune abathengisi bemagnethi abakhuselekileyo beNeodymium. Iqhutywa ziimfuno zabathengi, kulo nyaka i-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd. yasekwa liqela lobuchwephesha ngobunzulu bobuchule kunye nobubanzi bamava kwicandelo lomazibuthe.
Ukuze sikwazi ukulungiselela iimfuno zabaxumi, sixhotyiswe ngezixhobo zophando, zemveliso kunye nezokuvavanya, ezisinceda ukuba sikonwabele ukukhula kodwa okuzinzileyo. Ngenxa yokuba siyinkampani ekumgangatho ophakathi evelisa iitoni ezingama-500 zeemagneti zeNeodymium, sinokuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno zabathengi malunga neemagnethi kunye neendibano ezahlukeneyo zemagnethi, ezinje ngemagneti yeNeodymium, umazibuthe wokuvala, imagnethi yemagnethi kunye nokufaka umazibuthe, umazibuthe wokuloba, umazibuthe wesitishi , umazibuthe wokuloba, umazibuthe owenziwe ngerabha, umazibuthe wembiza, umazibuthe weofisi, umazibuthe weemoto, njl.Ngaphezulu kwe-85% yeemagnethi zethu kunye neendibano zemagnethi zithunyelwa eJamani, eFrance, e-UK, e-US naseJapan, ezixineneyo kwiimfuno zomgangatho.
Ngenxa yobukhulu bethu obuphakathi, siyaziqonda iimeko zeenkampani eziphakathi, iimfuno kunye nobunzima. Ke ngoko sizinikezele ekusebenzisaneni kunye nasekuncedeni abathengi abaphakathi ukuya phambili.
Ngaphaya koko, uninzi lweentlobo kunye nobukhulu beendibano zemagnethi esemgangathweni ziyafumaneka kwisitokhwe ukuhlangabezana neemfuno zabathengi zokuhambisa ngexesha elifanelekileyo.
Ungasixelela malunga neprojekthi yakho kwaye sinokukunceda ukusuka kumbono ukuya kwimveliso yecala. Nokuba uyayila ngoku, uyaphuhlisa okanye uyimveliso, uya kuqiniseka ukuba i-Horizon Magnetics enezakhono zokuyila kunye neqela lemveliso linokufaka isandla ngexesha elifanelekileyo kunye neendleko ezifanelekileyo.
Horizon Magnetics ibisoloko iyinkampani eqhutywa lixabiso. Ukuxabiseka kwethu kubonakalisa indlela esiphatha ngayo ishishini lethu xa sisebenzisana namaqabane ethu eshishini, abasebenzi kunye noluntu.
Uxanduva:Sibambe uxanduva lwethu kwikamva lethu nakuluntu ngokuphuhlisa kunye nokuvelisa iimagnethi ezigqwesileyo kunye nezisombululo zemagnethi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu kwimarike eguqukayo. Sizimisele ukukhuthaza uxanduva oluzimeleyo kunye nomoya weqela, kwaye sithathe inxaxheba ngokuzithandela kuphononongo, ukubeka iliso kunye nokuphuculwa okungagungqiyo kokusebenza kwethu, ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza ngokukuko. Siyaqonda ukuba uxanduva lwethu kuluntu lukhuselwe yimpumelelo yeshishini lethu. Ngapha koko, kufuneka sikhuthaze amaqabane ethu oshishino ukuba amkele umgangatho ofanayo wokuziphatha.
Ubuchule:Ukuqanjwa lilitye lembombo le-Horizon Magnetics impumelelo. Sifuna inkuthazo mihla le kumoya wethu woyilo kwaye sijolise ekuvuseleleni rhoqo ngokwenza izisombululo ezingekabikho kwaye zilandele iindlela ezintsha ukuze umbono wanamhlanje ube yinyani yangomso. Siphuhlisa inkcubeko yolwazi, uphando kunye noqeqesho oluqhubekayo oluvula amathuba amatsha kumaqabane ethu eshishini nakuthi.
Ubulungisa:Sijonga ukungakhethi macala onke njengemeko yempumelelo kwinkampani yethu xa sijongana kunye nakumaqabane ethu eshishini. Nokuba ungabaxhasi bethu okanye abathengi, kufuneka sikuhloniphe kwaye sihlonitshwe nguwe! Ngeli xesha kufuneka silandele ukhuphiswano olufanelekileyo nolusimahla nabakhuphiswano.